भान्साको कामले मानसिक तनाव कम गर्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
भान्साको कामले मानसिक तनाव कम गर्छ !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २२, २०७८ 9
खानेकुरा आफुले भनेजस्तै स्वादको बन्छ ? आफुले तयार गरेको परिकार खाएर अरुले के भन्छन् ? उनीहरु नयाँ स्वादमा रमाउनेछन् ?
खाना पकाउनु आफैमा कला हो । यसलाई ‘पाककला’ भनिन्छ ।
साथै कुनैपनि खानालाई फरक स्वादमा बनाउन सकिन्छ । थरीथरीको परिकारबाट एकैथरी स्वाद निकाल्न सकिन्छ । खाना पकाउनु आफैमा कला हो । भान्साको काम बोझ होइन, एक कला हो । सीप हो । सीपालु हातले नै मिठो र स्वस्थ्यकर खाना बनाउन सक्छन् । अनलाइनखबर बाट सभार